Nagarik Shukrabar - ‘संघर्ष गर्दै अघि बढेको हुँ’
सोमबार, ०३ साउन २०७३, ०४ : ३९ | दिलीप पौडेल , Kathmandu
वीरगञ्जका रूपेश पाण्डे नेपालमा कपडाका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्याउने उदीयमान व्यवसायी हुन् । कुनै व्यापारिक घरानाको उत्तराधिकारी नभई अग्रजको संगत, आफ्नै मेहनत, परिश्रम र दृढ इच्छा शक्तिले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका आरपी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डे धर्मकर्ममा निकै विश्वास गर्छन् । पाण्डेसँग शुक्रवारका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
जिन्दगीको एउटा अंग र खुशीको साधन हो ।
श्रीमती कुन बेला खुशी हुन्छिन् ?
समयमा घर पुगेर खाना खुवाउन पाए प्रफुल्लित हुन्छिन् ।
धर्मकर्म र घुमफिर ।
आस्था र विश्वासको संयोजन ।
धर्मले के दिन्छ ?
मनमा शान्ति ।
कुन बेला सम्झिनुहुन्छ ?
टेन्सन भयो भने भगवानलाई सम्झिन्छु ।
सबैभन्दा धेरै विश्वास ?
गणेश भगवानमा लाग्छ ।
गीतामा तिमीले केही लिएर आएका छेनौ । केही लिएर पनि जाँदैनौ । तर, निरन्तर मेहनत गर भन्ने विषयले मन छोयो ।
हातभरि किन औँठी लगाउनु भएको ?
सन् २००५मा दिल्ली जाँदा एकजना जेएनयूका लेक्चरसँग भेट भयो । उहाँसँग हस्तरेखाबारे राम्रो ज्ञान रहेछ । ती लेक्चरले दिएको सुझाव मेरो जीवनमा मेल खाँदै पूरा भएपछि उहाँकै सल्लाहअनुसार हातमा पाँच औँठी लगाएको हुँ ।
कहाँ घुम्नुभयो ?
२९ देश ।
विदेश घुम्दा के पाउनुभयो ?
व्यवस्थित व्यवसाय छ । बजारमा कुनै अवरोध छैन । ‘कर तिर काम गर’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रभावित छु ।
सिनेमाप्रति रुचि कस्तो छ ?
मनोरञ्जन नचाहने को होला र !
कुन फिल्म मन प¥यो ?
हिन्दी फिल्म ‘नाम’ ।
मन पर्ने हिरो ?
उनको बोल्ड पर्सनालिटी खूब मन पर्छ ।
बिदा कसरी मनाउनुहुन्छ ?
बिदामा फिल्म हेर्छु ।
बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म ।
कपडामा विदेशी ब्रान्ड कसरी भिœयाउनु भयो ?
पाँचसात वर्षयता नेपाली विदेश जानेक्रम निकै बढ्यो । विदेश जाँदा ब्रान्ड देखेपछि सपिङ गर्न थाले । अब नेपाली उपभोक्तालाई पनि विदेशी ब्रानड उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि ‘डमिलानो इटालिया’ ब्रानडको लेडिज ब्याग ल्याएर बजारमा बेच्न सुरु गरँे । अहिले धेरै ब्रान्ड भित्रिसकेका छन् ।
ब्रान्डेड कपडा लगाउनेहरू बढेका छन् । आम्दानी हुनेको आकर्षण यसैमा छ । सस्तो मूल्यका सामान तुरुन्त फाट्ने सम्भावना भएकाले ब्रान्डले बजार लिँदै गएको हो ।
ब्रान्डेड सामान किन्न दरबारमार्ग नै जानुपर्छ भन्छन् नि ?
अब यसको अन्त्य भएको छ । हामीले नै काठमाडौँको शंखमूलमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड सामान सहितको आउटलेट सुरु गरेका छौँ । यसलाई १० स्थानमा विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ ।
सामान्य कपडा र ब्रान्डेड कपडामा के फरक छ ?
ब्रान्डेड सामान टिकाउ हुन्छ । तुरुन्त नफाट्ने भएकाले यसले उपभोक्ताको मन जितेको छ । ब्रान्डेड सामानको गुणस्तर निकै राम्रो र विश्वसनीय भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो ।
ब्रान्डेड कपडा कम आम्दानी हुने उपभोक्ताको पहुँचबाट बाहिर छ भन्छन् नि ?
अहिले सबैलाई लक्षित गरेर बजारमा सामान आएका छन् । ब्रान्डेड पसल महँगो होइन । उपभोक्ताको छनोट अनुसारका कपडा पाइन्छन् बजारमा ।
नेपाली बजारमा कस्ता ब्रान्ड भित्रिएका छन् ?
विश्वभरका सबै ब्रान्ड भित्रिने क्रम रहेको छ । ती नेपालको बजारमा आइरहेका छन् । ५० प्रतिशत आइसकेका छन् । अबको एक÷दुई वर्षमा नेपाली प्रयोगकर्ताले सबै ब्रान्ड रोजीरोजी उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
व्यावसायिक यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
मेरो परिवारका सदस्य व्यापारमा नभए पनि अग्रज व्यक्तिले व्यापारमा छिराउनु भएको हो । यसमा लागेपछि संघर्ष गर्दै अघि बढेको हँु । व्यापारमा धेरै दुःख छ ।
कसरी सफल हुन सकिन्छ ?
सामान उपलब्ध गराउने पार्टी र उपभोक्तालाई भगवान मानेर इमानदारितासाथ काम गर्दा सफल भइन्छ । आफ्नो व्यवसायको स्टक, स्टाफ, गुणस्तरको नियमित मनिटर गर्नुपर्छ ।
नेपालजस्तो काम गर्ने वातावरण विश्वमा कतै छैन । तर, सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिनुप¥यो ।